saldhigga lama diidana,waxaa ladiidan yahay………..? ADAM NOKIA | Togdheer News Network
saldhigga lama diidana,waxaa ladiidan yahay………..? ADAM NOKIA
Garaadka ama caqligu marka aqoon iyo daacad lagu kabo,wuu kala gartaa saxa iyo khaladka.
Dadka dunida saddexaad loo bixiyey intooda badani kama ilbaxaan inay khaladka ku celiceliyaan,halkii la rabay in cashar laga barto,diinteenu suubani waxay inoo sheegatay in aan qofka muslimka ah god laba jeer lagu qaniinin(xadiith)
maamulka fiicani ee caddaaladda ku dhisani wuxuu keenaa nolol fiican iyo nabad,(shaykhul islaam) ibnu-taymiya waxa laga soo weriyaa inuu yidhi:”dawladdu hadday cadliga ku dadaasho ma dunto,gaaloba ha noqotee”.
wadamada qaarkood oo aan lahayn wax khayraad dabiici ah,ayaa hadana caalamka ugu horreeya waxay gadaan maskax iyo muruq keliya,maamul dacad ah,iyo shicib toosiya ayey leeyihiin.
Innagu waxaynu ka mid nahay wadamada ugu qanisan xagga khayraadka ayeynu ku jirnaa gaajana wuu u dhimanaynaa,waxna inooma kordhaan gudintii iyo hangoolka ayeynu sidanaa.halkaa waxa inna dhigay musuqmaasuq,been,khiyaamo iyo dulmiga oo loo hiiliyo,caddaaladda oo la naceb yahay.arrimaasna laguma najoxo waa jidka loo maro halaagga.maanta waxaa inala gudboon in aynu caqliga ku kaabno aqoon iyo daacadnimo is beddel dhab ahna ka samayno dhinac kasta,bal in aynu mar’uun helo caddaalad iyo in qof waliba xaqiisa helo,arrinta iyana midda meesha ka maqani waxaa weeye qofku hadduu gaboodfal sameeyo oo ku gefo ummada cid hadhow la xisaabtamaysa ma jirto,waa in al helo abaal marin ,karraani ilaa madaxweyne,tani waxay digniin u noqonaysaa in aan qofmasuul ahi leexan.
saldhiga iyo Emerat markaynu u nimaadno waa arrin fiican marka laga eego dhinacyo badan,dadka badankiisuna way dareensan yihiin,waxaase la diidan yahay.
1. Beddel qiimaheeda leh oo cad lama hayo, tuhun ayaana jira in xubno gaar ahi ku tagrifayaan hantidii ummadda laaluush ku bixinayaan baauur cad-cad iyo kumaan kun dolar dadkiina dhimanayo.(Alloow riyo ka dhig)
2.haddii dhib ka timaado saldhiga yaa ka dammiina?
3.wixii laga helo ee nacfi ah yaa si caddaalad ah ugu qaybinaya ummadda?
Arrimahan kor ku xusan haddii jawaab loo helo daawo fara badan ayaa loo helayaa mushkiladaha taagan.
UAE waa dawlad aan walaalo nahay inkastoo lagu eedeeyo in ay qayb ka ahayd inqilaabkii masar iyo turkiga iyo arrimo kale oo muslimka dhib ku ah,hadana marka loo eego shiicada oo qofkii ogi waxa ay aaminsan yihiin aanu muslim ku sheegi karin (waxa aaminsan yihiin,in khuladafii abu-bakar,cumar iyo cusman gaalo yihiin,iyo waliba wax kasii daran).somali badan oo debedda joogtay ayaa shiicadu duufsatay oo carurtoodii u geeyey waajib ayey inagu tahay in aan ka hor-tagno.
wixii wanaagga ah aan kawada shaqayno,xumaantana aan ka hortagno,waxaan helaynaa liibaanta ifka iyo aakhirada in sha Allaah.